Hogaamiyaha dalladda Midowga Musharraxiinta oo dalka dib ugu soo noqday. – Voice of Somalis In Exile
Khamiis, 29th of April, 2021 (Mogadishu)- Madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel-gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah hadda ah hogaamiyaha xisbiga Himillo Qaran, isla markaasna ah guddoomiyaha dallada MIDOWGA MUSHARRAXIINTA oo ay ku bahoobeen, musharraxiinta u taagan in eey galaan tartanka madaxtinimada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed Sheekh Muuse, ayaa ku soo laabashadiisa dalka waxeey ku soo aaday, xilli kala guur siyaasadeed uu dalku ku jiro, xiisado waaweyna ay ka taagan yihiin, magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Shariif ayaa ku sheegay shir jaraa’id oo uu qabtay, wax yar ka dib u soo laabashadiisa, in Muddo kordhintii uu baarlaamku sameeyey dhowaantaan ay ahayd sharci-darro sababtay in dad badani dhintaan, qaar kalena dhaawacmaan.
Source: Himilo Qaran
One thought on “Hogaamiyaha dalladda Midowga Musharraxiinta oo dalka dib ugu soo noqday.”
Aamina xundubeey naga qabta facaa tuuga